Yini okusha okuvela kuJo Nesbø. Ekwindla Indlalifa futhi ... izobuya uHarry Hole | Izincwadi Zamanje
Isithombe sikaJo Nesbø: (c) uDebra Hurford Brown.
Isifunda esibanzi sabathembekile se- Jo Nesbo ngisenhlanhleni kulo nyaka. Ngo-Ephreli sasinayo Macbeth futhi ku Okthoba iyaqhubeka nokudayiswa Indlalifa (ukuhumusha-noma isinqumo somhleli- mahhala kakhulu ngesihloko sokuqala, Sonnen, kulula njengeNdodana). Ngazifundela osukwini lwakhe futhi Ngiyincoma kusukela manje kuqhubeke.
Futhi ngonyaka olandelayo, ku uJoelio, i-fireproof ibuya (ngoba kufanele ishise kuphela) ukhomishani UHarry hole endabeni yayo yeshumi nambili, Umsikazi (Angilokothi ngihumushe, bese kwenzeka okwenzekayo, kepha okwamanje nangokoqobo Ummese). Asibone ziphathelene nani lezi zithandani ezintsha futhi ngethemba lokuthi maduze zizoshicilela amanye amanoveli amabili asazovela eNesbø: Igazi eqhweni y Ilanga laphakathi kwamabili.
Abafundi abajwayelekile be-Actualidad Literatura kumele ngabe sebazi ngami Indaba yothando edume futhi enamandla ngale band band ye-viking, Wayengu-shark wezezimali, i-rocker ephumelelayo (ubelokhu ephosa ihlobo lonke kulawo mafayili ezwe lakhe) futhi ephethe inoveli yobugebengu. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi ngilahlekelwa ngumqondo wami lapho ngikhuluma ngaye. Lapho baya khona ukubonakala kwami ​​kokuzayo nokushodayo.
1.1 Imayelana nani
Olandelayo uyathengiswa I-11 ngo-Okthoba futhi kuyinoveli yesibili ezimele ngemuva Izihloko. Ishicilelwe ngo 2014, ngakho-ke cishe kwase kuyisikhathi sokuthi ngifinyelele ngale ndlela. Kuthiwani nge- ukuhunyushwa kwesihloko Sengivele ngiphawule ngayo. Kwesinye isikhathi izinqumo zabahleli zokushintsha okwangempela ziyahlekisa, okuya kumbhali, ngoba ngubani owaziyo ukuthi yiziphi izindlela. Ngaphezu kwalokho, ngoNesbø kuze kube manje babezihloniphile iziqu zabo zokuqala. Noma kunjalo…
I-protagonist ngu Sonny lofthus. Uneminyaka engamashumi amathathu futhi usechithe iminyaka eyishumi nambili edlule yempilo yakhe ejele ngamacala angawenzi. Usengumlutha we-heroin kusukela lapho ubaba wakhe wanquma ukuzibulala ngaphambi kokuthi aqokwe njengephoyisa elikhohlakele. USonny wangena enkingeni wagcina esejele.
Lapho kuba yifayela le- uhlobo lwe-guru noma lokuvuma izono ezinye iziboshwa, kodwa futhi uyisizinda sabaningi: izikhulu nomphathi, amaphoyisa, abameli… Futhi bonke bafuna ahlale ejele. Futhi ngaphezu kwakho konke, inkosi ebaluleke kunazo zonke e-Oslo.
Kodwa ngelinye ilanga esinye seziboshwa sitshela uSonny Into ebaluleke kakhulu ngokufa kukayise. Ngakho-ke uSonny unquma lokho kufanele evule noma yini. Futhi uzokwenza kwesinye seziqephu ezibonakala zingenakwenzeka futhi luphawu lwendlu lwakwaNesbø. Ngemuva kwalokho cabanga ngokusesha ukuziphindisela nganoma iyiphi inkokhelo, kusuka ngaphansi komhlaba kuya ekusetshenzisweni okuphezulu komthetho, kanye nokuqhubeka nokuphenya ukuthi kwenzekeni empeleni. Kodwa futhi bayamshushisa. Endleleni bazowela USimon Kefas, iphoyisa elingumakadebona futhi elazi amaqiniso amaningi ngoSonny, kanye ne uthando lwentombazane lokho kuzokusiza.
Kukhona njalo ukungabaza yabafundi abazinikele kakhulu nabazinikele kakhulu lapho lowo mbhali ophumelele kakhulu ochungechungeni lomlingisi ethatha isinqumo soku shintsha okwesithathu bese uphuma nezinye izindaba. Yilokho okwenzeka ngoNesbø. UHarry Hole wakhe uyindalo inkulu kakhulu futhi iyindilinga ukuthi selivele lidlulile nokuthi lokho kuyasibekela (futhi mhlawumbe kuzosibekela vele, noma ngabe uNesbø uyakufuna noma cha) noma yini enye engiyibhalayo.
Kwenzekile nge Izihloko (Ukushintshwa kwezwi elilandisayo liye kumuntu wokuqala, indaba njengeyokuqala, i-protagonist ehluke kakhulu ...). Futhi kwenzeke futhi nge Macbeth, ukuthi sehlukanise abathembekileyo bakhe emibonweni ephikisanayo. Kuyaqondakala. Kepha-ke, uMacbeth unguMacbeth kanti uNesbø akakasunguli lutho, ulutshele ngendlela yakhe kuphela. Lokhu kungenzeka futhi nge Indlalifa nalezo ezisazoshicilelwa, izindaba ezimfishane kakhulu futhi ezihluke kakhulu kunalezo zamaphoyisa aseNorway anesiphithiphithi.
Ngingasho nje lokho Indlalifa ngiyithandileindlela engangibathanda ngayo Izihloko, Igazi eqhweni y Ilanga laphakathi kwamabili. Okubonakala njengokunye kimi Indaba enhle ngesitayela sendlu yakwaNesbø. Ngokusonta kwayo, i- isintu wabalingiswa bakhe, kuhlanganiswe iziza zayo futhi i ukuthandana okujulile lokho kusekela konke. Yebo, UHarry akekho, kepha akudingekile. Kunempilo engaphezulu kwakhe, kunezindaba eziningi. Futhi zikufanele ngoba zivela eNesbø.
Futhi, futhi njengesizotha Ngingakhuluma ngombono wombhali, ngezikhathi ezithile sidinga ukushintsha i-chip, sicabange izidalwa ezintsha futhi sakhe imihlaba emisha. Kepha kuyiqiniso futhi ukuthi asikwazi ukuthanda njalo futhi singadumaza. Umbuzo ukuthi siyithatha. Futhi laba balobi abasunguliwe banokuningi kunokucatshangwa. Vele, ngale ndoda ngikucacisile.
Kepha kulungile, akekho okhathazayo. Yebo, uyabuya, umlutha wethu omkhulu kakhulu, uJim Beam wethu uqobo: Harry. Futhi kuzoba nalokhu Ummese. Noma, uma benza okufanayo nakwangaphambilini, isihloko sizoba njalo Umphetho, I-cut o Ummese.
Ushaye khona. NgoJulayi odlule uNesbø umemezele ukuthi ishumi nambili Inoveli kaHarry Hole izophuma 11 de julio de 2019. Ngokusobala ekuqaleni sithola uHarry evuka nge Isicabucabu esibi negazi limboze izandla nezingubo. Inkinga ikhona, yize simazi uHole, akusasimangazi ukuthi ungena kokubi kakhulu. Impikiswano, kuleli phuzu, ukubona ukuthi uNesbø uzokuya kude kangakanani (futhi) ngemuva kokwenza lesi sidalwa sidlule ezenzakalweni eziningi kangaka.
Iqiniso ukuthi inoveli nayo izobuyisa isitha esidala nesibulalayo sikaHarry. Kubukeka kungakholeki ukuthi usesele ngemuva kwalabo asevele enabo. Kepha lowomqondo wobusathane nohlanya ohlukanisa uNesbø ngokuqinisekile uzoqhubeka nokumakhela okubi kakhulu. Noma, njengoba labo bethu abathanda leli phoyisa elingenathemba bengazi kahle, umphikisi wakhe omnyama kakhulu uyohlala enguye uqobo.
Lutho, ukulinda futhi ukuqhubeka nokufunda uNesbø. Ngaphandle kokungabaza, ngaphandle kokwesaba ukudumazeka, ngaphandle kokubandlululwa. Ngaphezu kwalokho, kungcono kakhulu ukwakha umbono ofanele kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli emnyama » Yini okusha okuvela kuJo Nesbø. Ekwindla Indlalifa futhi… izobuya uHarry Hole